रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - सेक्सन
घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्
सेक्सनमा तपाईँं इन्टाइर कागजात घुसाउन सक्नुहुन्छ वा अरूबाट नाम दिइएको सेक्सन. तपाईँं सेक्सन घुसाउन सक्नुहुन्छ DDE को रूपमा link.
To editasection, choose ढाँचा - सेक्सनहरू.
सेक्सन घुसाउनुहोस् संवादले समावेश गरेको तलका ट्याबहरू:
बायाँ र दायाँ सीमान्त सँग सेक्सन इन्डेन्ट गर्नुहोस्
पृष्ठभूमि रङ वा ग्राफिक सेट गर्नुहोस्।
कागजातमा हालको कर्सर अवस्था परिभाषित सेक्सन घुसाउनुहोस्.
Title is: सेक्सन घुसाउनुहोस्